Aka na-achị ndị Anambra, Willie Obiano, ga-akwado mmepe na steeti ahụ
Willie Obiano, onye isi ọchịchị Steeti Anambra, ekwuona n’ọchịchị ya dị njikere ịrụ ahịa n’ebe dị iche iche na steeti ahụ. A ga-eji akara ngwa ọgbara ọhụrụ were rụọ ahịa ndị ahụ. Akara ngwa ọgbara ọhụrụ ndị ahụ ga-agunye ihe ndị e ji agbanwu ọkụ latrịk, ụlọ mkpọchi...
A kpọọna ndị mba Afrịka oku ka ha kwado ọchịchị onye kwuo uche ya
Onye ji aha ndị otu All Progressive Congress (APC) azọ ọkwa onye isi ala na Naịjiria, bụ Jenaral Muhammadu Buhari, akpọkuona ụmụ Afrịka niile ka ha na-akwado ọchịchị onye kwuo uche ya, n’ihi na nanị ọchịchị onye kwuo uche ya nwere...
A torola Oriaku Asime G.T. Sekibo
Ndị Channels Television na-akọwa na ndị ntọ atọrọla Asime Sekibo, nwunye onye omebe iwu bụ Sinetọ George Thompson Sekibo.
Rochas na-akowa n’Ohakim mefuru ijeri naira 62 n’uzo na-ezighi ezi